Dabka opal waa muuqaal hufan oo muuqaal ah - video
Macnaha dabka opal. Waxaan ku sameysannaa dahab qaali ah dhagax diiran oo ceyriin ah oo go'an ama cayriin ah oo loo dhigay hilqado, kaatunno, silsilad, jijin ama suumanka
Dabka opal waa mid hufan oo loo yaqaan 'opal translucent opal', oo leh midabyo diiran oo diirran oo huruud ah illaa oranji ilaa casaan. In kasta oo aysan inta badan soo bandhigin ciyaar midab leh, marmar dhagax ayaa soo bandhigi kara bilig cagaaran oo dhalaalaya. Ilaha ugu caansan waa gobolka Querétaro ee Mexico, opals-kan waxaa badanaa loogu yeeraa opals-ka Mexico. Dhagaxyada ceeriin ee aan soo bandhigin ciyaarta midabka waxaa mararka qaarkood loo yaqaan 'jelly opals'. Opals-ka Mexico waxaa mararka qaar lagu jaro alaabada martida loo yahay ee rhyolitic hadii ay adag tahay in loo ogolaado goynta iyo nadiifinta. Noocan ah opal-ka Mexico waxaa loo yaqaan 'Cantera opal'. Sidoo kale, nooc ka mid ah opal-ka ka yimaada Mexico, oo loo yaqaan 'opal water Mexico', waa midab aan midab lahayn oo soo bandhigaya midab buluug ama dahabi ah oo gudaha ah.
Girasol opal waa eray mararka qaar si khalad ah oo aan sax ahayn loo adeegsado si loogu tixraaco dhagxaanta dhagxaanta dabka ceyriinka ah, iyo sidoo kale nooc ka mid ah hufnaanta nooca quartz ee caanaha laga soo qaado ee Madagascar kaasoo soo bandhigaya asterism, ama xiddig saameyn, marka si sax ah loo jaro Si kastaba ha noqotee, girasol opal-ka dhabta ahi waa nooc ka mid ah hyalite opal oo soo bandhigaya dhalaal buluug ah ama sheen ah oo la socda isha iftiinka agagaarka. Ma aha ciyaar midab leh sida lagu arkay opal qaali ah, laakiin waa mid saameyn ku yeelanaysa ka-qaybgalka cqaadirrada. Waxaa sidoo kale mararka qaarkood loo yaqaan opal-biyo, sidoo kale, markay ka timaaddo Mexico. Labada goobood ee caanka ah ee noocan ah opal waa Oregon iyo Mexico.
Opal Peruvian sidoo kale loo yaqaan buluug opal waa semi-opaque dhagax buluug-cagaaran buluug-buluug ah oo laga helo Peru, taas oo inta badan la jaro si loogu daro shaxda dhagxaanta badan ee madmadow. Ma muujineyso ciyaar midab leh. Blue opal sidoo kale waxay ka timaaddaa Oregon ee gobolka Owyhee, iyo sidoo kale Nevada oo ku taal agagaarka Virgin Valley, USA.
Madadaalada dabka madow
Ma jiro opal dab madow. Opal dab oo macnihiisu yahay opal hufan laakiin dhammaan opals-ka madow waa madmadow taasna waa maxay sababta aan macno lahayn. Dad badan iyo kuwa ka ganacsada jawharada (oo aan ku taqasusay cilmiga gemo) ayaa isku qalday magacyada dhagxaanta ama magac qaldan ayay u bixiyaan dhagxaanta. Waxay u badan tahay inay isku dayaan inay sharxaan opal madow oo wata ciyaar ifafaale midab leh dusha sare.
Macnaha dabka opal
Waa dhagxan qaali ah oo macno iyo sifooyin u leh soo saarista shakhsiyadda milkiilaha. Sida magaca uun loo muujiyo, dhagaxan qaaliga ahi wuxuu astaan ​​u yahay "olol" oo wuxuu leeyahay tamar aad u xoog badan. Waxaad u isticmaali kartaa awoodaada si hufan adoo gubaya tamartaada. Way fiicantahay inaad isticmaasho markaad rabto inaad xaqiijiso riyadaada ama hadafkaaga.
Dabka opal ee ka yimaada Mexico
Dabka opal oo ku shaqeeya mikroskoob
Waa maxay opal-ka dabku?
Waxaa lagu aasaasay moolka volcanoes-ka qadiimiga ah, dhagaxa qaaliga ah waxaa la sameeyaa marka biyuhu ku soo qulqulaan lafaha silica ee hodanka ku ah silica, iyagoo buuxinaya tolkiisa iyo godadkooda. Kulkaa iyo cadaadiskan cajiibka ah hoostiisa, laafku wuxuu ku dhex dabaalaa biyo dhexdiisa, isagoo sameeya dhibicdan sixirka, qorraxda-dhalaalaya.
Miyuu opal dabku qaali yahay?
Midabka ugu qiimaha badan waa casaan. Liinta iyo jaallaha ayaa xoogaa ka caansan oo ka jaban, laakiin midabadan ayaa wali ka mid ah kuwa ugu qaalisan marka la barbar dhigo midabada kale ee opal. Midabkastoo doono ha noqdee, kolba midabkiisu aad u kacsan yahay, ayaa ka qiimo badan.
Waa dhagax noocee ah opal dab?
Sayniska cilmiga macdanta, jawharadani ma aha macdan, laakiin waa macdan aan caadi ahayn. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan dhab ahaan ku jirin qaab dhismeed kristal ah sida macdanta runta ah. Sida dhammaan noocyada kale ee opal, Waa isku soo uruurinta qaybaha yaryar ee silica.
Waa maxay farqiga u dhexeeya opal iyo dab opal?
Opal waa madmadow. Hilqado dabeed opal waxaa lagu sameeyaa si hufan oo loo yaqaan 'opal translucent opal', oo leh midabbo diiran oo diiran oo huruud ah ilaa oranji illaa casaan ah In kasta oo aysan inta badan soo bandhigin ciyaar midab leh, marmar dhagax ayaa soo bandhigi kara bilig cagaaran oo dhalaalaya.
Yey tahay inuu xirto dharka opal-ka?
Qofka ku dhasha calaamadaha zodiac Taurus & Libra waa inuu xirtaa. Aad ayaa lagula taliyaa qof, oo leh hoyga 'Mahadasha' ama 'Antardasha' oo ka tirsan Venus Shukra. Opal waxtar weyn ayey u leedahay dadka qaba madhalaysnimada, cilladaha galmada, Libido, iyo tabar darrida.
Ka iibso opal dabiici ah dukaankeenna qaaliga ah
Waxaan ku sameysannaa dahab qaali ah dhagax diiran oo ceyriin ah oo go'an ama cayriin ah oo loo dhigay hilqado, kaatunno, silsilad, jijin ama suumanka.
Tags dagax weyn, Koroit, Opal
Tags Labalaab, Opal